Go'aan Maxkamadeed ee la Xiriira Mukhalasnimo oo Dhacday - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Go'aan Maxkamadeed ee la Xiriira Mukhalasnimo oo Dhacday
La daabacay onsdag 16 maj 2012 kl 16.43
Maxkamadda Degmada Nyköpin ayaa maanta go'aan ka gaartay nin lagu eedeeyey inuu galay dembi la xiriira mukhalasnimo culis. Go'aanka ay maxkamaddu gaartay ayaa lagu sheegay in oodda laga qaaday iyadoona wax dembi ah lagu caddeeyn waayay ninkaa, islamarkaana aan sidoo kale dibadda loo masaafurin karin.
Siddeedii bishii abriil oo ku beegneyd maalin axad ah ayaa abaaraa makhribnimadii laga qabtay garoonka dayuuradaha ee Avesta nin iyo gabar la sheegay iney wada socdeen, dabadeedna loo taxaabay ruumka ninkii. Maalintii arbacada ee toddobaadkii tagay toddobaadkii ina dhaaftay ayaa ninka lagu soo saaray maxkamad magaalada Nyköping, isagoona lagu soo eedeeyey inuu galay fal dembiyeed culus ee mukhalasnimo.
In oodda laga qaado
Maanta oo arbaca ah saacaddu markay ahayd 14:00 duhurnimo ayay maxkamaddu gaartay go'aankeedi kuna dhawaaqday in oodda laga qaado maadaama aan lagu caddeeyn karin wax dembiya, iyo sidoo kale inaan dalka laga masaafurin karin.